Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 4:1-21
Vatariri vanofanira kuva vakatendeka (1-5)
Kuzvininipisa kwevashumiri vechiKristu (6-13)
“Musapfuura zvakanyorwa” (6)
VaKristu vari kuonekwa nevanhu vese sevari mudariro (9)
Pauro anotora vaanonamata navo sevana vake (14-21)
4 Munhu anofanira kutiona sevashandi vari pasi paKristu uye vatariri vezvakavanzika zvitsvene* zvaMwari.+ 2 Panyaya iyi, chinotarisirwa pavatariri ndechekuti vawanikwe vakatendeka. 3 Saka kwandiri hazvinyanyi kukosha kuti ndiongororwe nemi kana kuti nedare revanhu. Ndingatoti kunyange ini pachangu handizviongorori. 4 Nekuti hana yangu hainzwi iine mhosva. Asi izvi hazvirevi kuti ndinobva ndanzi ndakarurama; anondiongorora ndiJehovha.*+ 5 Saka musatonga+ chinhu nguva yacho isati yakwana, kusvikira Ishe auya. Achaisa pachena zvinhu zvakavanzwa murima uye achaita kuti vavariro dzemwoyo yevanhu dzizivikanwe, uye mumwe nemumwe achabva arumbidzwa naMwari.+ 6 Zvino, hama, ndava kushandisa mashoko aya pandiri naAporo+ kuti zvikunakirei imi, kuti mudzidze kwatiri mutemo wekuti: “Musapfuura zvakanyorwa,” kuti murege kuzvitutumadza,+ muchiona mumwe munhu kunge ari nani kupfuura mumwe. 7 Nekuti ndiani anoita kuti usiyane nemumwe? Chii chaungati unacho chausina kupiwa?+ Zvino kana wakaita zvekupiwa, nei uchizvirumbidza sekunge kuti hauna kuchipiwa? 8 Matoguta here? Matopfuma here? Matotanga kutonga semadzimambo+ isu tisipo here? Chokwadi ndingatoti dai matanga kutonga semadzimambo, kuti isuwo titonge nemi semadzimambo.+ 9 Nekuti ndinoona sekuti Mwari akatiita kuti isu vaapostora tive vekupedzisira pakuratidzirwa sevanhu vakatongerwa rufu,+ nekuti tiri kuita setakaiswa mudariro kuti tionekwe nenyika,+ nengirozi, nevanhu. 10 Tiri mapenzi+ nekuda kwaKristu, asi imi makangwara muna Kristu; isu hatina simba, asi imi makasimba; imi munokudzwa, asi isu tinozvidzwa. 11 Nanhasi tichiine nzara+ nenyota,+ uye takapfeka mamvemve,* tichirohwa+ uye tisina pekugara 12 tichifondoka nebasa, tichishanda nemaoko edu.+ Patinotukwa, tinokomborera;+ patinotambudzwa, tinoramba tichitsungirira;+ 13 panotaurwa zvakaipa nezvedu, tinopindura neunyoro;+ nanhasi tichiri kuita semarara enyika, tsvina inobviswa pazvinhu zvese. 14 Handisi kunyora zvinhu izvi kuti ndikunyadzisei, asi kuti ndikurayirei sevana vangu vanodiwa. 15 Nekuti kunyange mungava nevadzidzisi 10 000 muna Kristu, chokwadi ndechekuti hamuna vanababa vazhinji; nekuti ndakava baba venyu muna Kristu Jesu nekukuzivisai mashoko akanaka.+ 16 Saka ndinokukurudzirai kuti muve vatevedzeri vangu.+ 17 Ndokusaka ndiri kukutumirai Timoti, nekuti iye mwana wangu anodiwa uye akatendeka munaShe. Achakuyeuchidzai nezvenzira dzangu pamusoro paKristu Jesu,+ sekudzidzisa kwandiri kuita kwese kwese muungano dzese. 18 Vamwe vari kuzvitutumadza, sekunge kuti handisi kuzouya kwamuri. 19 Asi ndichauya kwamuri munguva pfupi iri kutevera, kana Jehovha* achida, kwete kuti ndizonzwa kutaura kwevaya vari kuzvitutumadza, asi kuti ndione simba ravainaro. 20 Nekuti Umambo hwaMwari haisi nyaya yematauriro emunhu asi yesimba raainaro. 21 Munoda zvipi? Ndiuye kwamuri neshamhu+ here kana kuti nerudo neunyoro?
^ ChiGir., “hatina kupfeka.”